19 Zvino Jobho akapindura, akati: 2 “Mucharamba muchishungurudza mweya wangu kusvikira rini+Uye mucharamba muchindipwanya nemashoko kusvikira rini?+ 3 Manditsiura kagumi aka;Hamunyari kuti muri kundiomesera kwazvo.+ 4 Kana ndakakanganisa,+Kukanganisa kwangu kuchagara neni. 5 Chokwadi kana muchizvitutumadza kwazvo pamberi pangu,+Muchiona kuzvidzwa kwangu kwakakodzera,+ 6 Ibvai maziva kuti Mwari akanditsausa,Uye akandikomberedza nemambure ake okuvhimisa.+ 7 Tarirai! Ndinoramba ndichishevedzera kuti, ‘Ndakuvadzwa!’ asi handipindurwi;+Ndinoramba ndichichemera kubatsirwa, asi handiruramisirwi.+ 8 Akavhara gwara rangu norusvingo rwematombo,+ ini handikwanisi kupfuura;Uye iye anoisa rima mumigwagwa yangu.+ 9 Akabvisa kukudzwa kwangu,+Uye anobvisa korona yomusoro wangu. 10 Anondiputsira pasi kumativi ose, ndoenda;Uye anodzura tariro yangu sezvinoitwa muti. 11 Anonditsamwira kwazvo,+Uye anoramba achindiona semhandu yake. 12 Varwi vake vanouya vakabatana vogadzira nzira yavo kuti vandirwise,+Uye vanodzika musasa vakakomberedza tende rangu. 13 Iye akaisa hama dzangu kure neni,+Uye vanhu vanondiziva vandisiya. 14 Vandinozivana navo vepedyo havasisipo,+Uye vaya vandinoziva vandikanganwa, 15 Vaya vanogara vari vatorwa mumba mangu;+ uye varandasikana vangu vanondiona somumwe munhuwo zvake;Vava kundiona somunhu wokune imwe nyika. 16 Ndinoshevedza mushandi wangu, asi haapinduri.Ndinoramba ndichimuteterera nomuromo wangu kuti andinzwire tsitsi. 17 Mhepo yandinofema yava kusemesa mudzimai wangu,+Uye ndava kunhuhwa kuvanakomana vomudumbu raamai vangu. 18 Uyewo vakomana vaduku vandiramba;+Pandinosimuka, vanotanga kutaura zvakashata pamusoro pangu. 19 Vanhu vose veboka randaishamwaridzana naro vanondisema,+Uye vaya vandaida vandipandukira.+ 20 Mapfupa angu anonamatira ganda rangu nenyama yangu,+Uye ndinopona nepaburi retsono. 21 Haiwa imi shamwari dzangu, ndinzwirei nyasha, ndinzwirei nyasha,+Nokuti ruoko rwaMwari rwandibata.+ 22 Munorambireiko muchinditambudza sezviri kuitwa naMwari,+Musingagutswi nenyama yangu? 23 Haiwa, kudai mashoko angu ainyorwa!Haiwa, kudai ainyorwa mubhuku! 24 Nechinyoreso chesimbi+ uye nomutobvu,Haiwa, kudai ainyorwa achiita zvokutemerwa padombo! 25 Ini ndinonyatsoziva kuti mudzikinuri+ wangu mupenyu,Uye iye achauya pashure pokunge ndaenda, omira+ paguruva. 26 Pashure pokunge vasvuura ganda rangu,—saizvozvi!Kunyange ndaondoroka ndichaona Mwari, 27 Wandichaona pachangu,+Iye achaonekwa nemaziso angu, asi kwete nomumwe munhuwo zvake.Itsvo dzangu dzaneta mukatikati mangu. 28 Nokuti imi munoti, ‘Tinorambirei tichimutambudza?’+Mudzi wenyaya yacho zvauri mukati mangu. 29 Ityai bakatwa,+Nokuti bakatwa rinoreva hasha dzinoitirwa kukanganisa,Kuti muzive kuti kune mutongi.”+